Galaxy S21 nwere mmelite ọhụrụ na ndozi dị iche iche | Gam akporosis
na Galaxy S21 na-agabiga oge ọjọọ, ma ọ bụ ndị ọrụ, kama. Ma ọ bụ na akụkọ dị iche iche nke ndị a na-egosi na ekwentị nke usoro ahụ, ma e wezụga nke ụdị Ultra, ha anaghị ewepụta nnwere onwe dị mma. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, e belatala ndụ batrị nke Galaxy S21 na Galaxy S21 Plus.
Samsung maara nke a na, ọ bụ ezie na mmelite ọhụrụ nke ngwaọrụ ndị a na-anata n'oge na-adịbeghị anya anaghị egosipụta mkpebi nke nsogbu a, ọ nwere ike ịbụ onye na-edozi ya.
Galaxy S21 usoro na-enweta ọnwa nchekwa nke ọnwa Febụwarị na ọtụtụ nkwalite
Mmelite nke Galaxy S21 natara na mbido February, nke bịara na nọmba ụlọ G99x0ZHU1AUAE, bụ nke kpatara mbelata ndụ batrị nke mobiles ndị a.
Ugbu a enwere OTA ohuru na-abia na ngwa femụwe G99xBXXU1AUB6. Nke a nwere a download nke 257 MB na, dị ka atụmanya kachasị elu, ọ ga-edozi ntụpọ ahụ nke ezinụlọ nke ọkọlọtọ na-ewebata ugbu a. Ọzọkwa, ọ na-abịa na nchekwa nchekwa February, ọ bụ ezie na ọ kabeghị aka maka ndị ọrụ niile. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ dị ka etinyere ya n'ọtụtụ Europe, ebe ọ bụ na e nwere ọtụtụ akụkọ na-egosi na ọtụtụ ndị ọrụ anatala ya n'ọtụtụ mba.
Nwelite ohuru maka njedebe di elu na-egosiputa mmezi ahụhụ dị iche iche, ọtụtụ mmelite na ọtụtụ njikarịcha iji mee ka nkwụsi ike nke usoro ahụ dịkwuo elu, nke a na-ahụkarị nke OTA. Enweghị nkọwapụta nke ozi dị mkpa, ma ọ bụ ọrụ ọhụrụ na atụmatụ.
Iji lelee ma ọ bụrụ na ị nweela ya, gaa Ntọala wee gaa na ngalaba mmelite, ọ bụrụ na ịnabataghị ọkwa ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Samsung Galaxy S21 nwetara mmelite ọhụrụ na ndozi ahụhụ na njikarịcha